2017ပြီလ2| 87 ၏စာမျက်နှာ 2020 | NAB သတင်းများ | XNUMX NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » 2017 » ဧပြီလ (စာမျက်နှာ 2)
အငယ်တန်းဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်နာ (Entry Level)
ရောဘတ်Krügerအားဖြင့် 2017 NAB ပြရန်တင်ပြမှု, Kyno ပူးတွဲဖန်တီးသူနောက်ဆုံးဆယ်စုနှစ်ရဲ့ "ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရေး၏ဒီမိုကရေစီကူးပြောင်းရေး" အမှန်တကယ်အံ့သြဖွယ်အရာဖြစ်၏။ ဒါဟာနှစ်ပေါင်းများစွာအစောပိုင်းကနေ့၏အလင်းမြင်ကြပြီဘယ်တော့မှမယ်လို့မာလ်တီမီဒီယာအတွေ့အကြုံများအတွက်ရရှိလာတဲ့, entry ကိုတစ်ဦးအနိမ့်အတားအဆီးကနေတစ်ဆင့်ဖန်တီးဖို့ပိုကလူ enabled သိရသည်။ ဘယ်လိုဖြစ်သွားတာလဲ? ဖိုင်-based Workflows များ၏နိဒါန်းအတူတူ ...
Entries သည် motion + ခေါင်းစဉ်ဒီဇိုင်းသူဟာ Emmy ခေါ်ရန်မေလ 1st တွင်ပိတ်
မေလ 1st နောက်ဆုံးနေ့အလျင်အမြန်ချဉ်းကပ်အဖြစ်ကို Motion + ခေါင်းစဉ်ဒီဇိုင်းသူဟာ Emmy entries တွေကို၎င်း၏နောက်ဆုံးခေါ်ဆိုခထုတ်ပေးလျက်ရှိသည်။ အဆိုပါထူးချွန် Motion ဒီဇိုင်းနှင့်ထူးချွန်ပင်မခေါင်းစဉ်ဒီဇိုင်းပြိုင်ပွဲအရည်အချင်းပြည့်မီအလုပ်အတွက်တစ်ဒါဇင်ကျော်အမျိုးအစားများပါဝင်သည်နှင့်ဒီဇိုင်နာများ, ဖန်တီးမှုဒါရိုက်တာများ, အနုပညာဒါရိုက်တာများ, Animation, စာစီ, အယ်ဒီတာများ, Illustrator, သတ်ပုံ, ဓာတ်ပုံဆရာများနှင့်ရိုက်ကူးရေးမှဖွင့်လှစ်သည်။ ယခုနှစ်တွင်ထူးချွန် Motion ...
2017 #NABShow - နေ့4Wrap-up
ဒီနေ့သည်စတုတ္ထမြောက် (နှင့်နောက်ဆုံး) နေ့ဖြစ်သော ၂၀၁၇ ခုနှစ် NAB Show - နှင့် WOW! တစ်နေ့ဖွစျခဲ့ !!! 🙂နောက်ထပ်ဘုန်းကြီးသောနေ့တစ်နေ့။ သိပါတယ်၊ သူတို့ကဟောလိဝုဒ်က La La Land လို့ပြောကြတယ်။ ဒါပေမယ့်သင်ဟာ NAB Show မှာ၊ ပစ္စည်းကိရိယာတွေအားလုံးနဲ့ La La Land ကိုလုပ်နိုင်တဲ့သူတွေအများကြီးဝိုင်းရံနေတဲ့အချိန်မှာဒီဟာက MORESO ကိုတောင်ခံစားရတယ်။
Aaton ဒစ်ဂျစ်တယ်သတင်းစာကြေငြာချက် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ Lasပြီလ ၂၇ ရက်၊ Las Vegas, USA သို့ထုတ်လွှင့်ရန်: Aaton Digital မှထုတ်လုပ်သော CantarMini 27 track track mixer-recorder သည် NewBay ၏ Best of Show Award ဆုကို Pro Sound News မှ 2017 NAB Show တွင်ပြသသည်။ NewBay ၏အကောင်းဆုံးပြသခြင်းဆုများကိုစက်မှုလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူအဖွဲ့မှအကဲဖြတ်။ ... အပေါ်အခြေခံပြီးရွေးချယ်သည်
အဆိုပါ QYOU ယူနိုက်တက် Group နဲ့အရှေ့တောင်ဥရောပအတွက်ဖြန့်ချိ
QYOU မီဒီယာ (TSVX: QYOU) multiscreen ဖြန့်ဖြူးဘို့, ပရီမီယံ၏ကမ္ဘာ့ဦးဆောင်မှူး '' အကောင်းဆုံး-of-the-ကို web 'သည်ဗီဒီယို, ဆားဘီးယား, ဆလိုဗေးနီးအတွက်ဖောက်သည်ရန်၎င်း၏ပြတိုက်မှူးအကြောင်းအရာကယ်လွှတ်ခြင်းငှါယူနိုက်တက် Group နဲ့တစ်ဦး linear ရုပ်သံလိုင်းဖြန့်ဖြူးသဘောတူညီချက်ကြေညာလိုက်ပါတယ် ဘော့စနီးယားနှင့်ဟာဇီဂိုဗီးနားနှင့်မွန်တီနီဂရိုး။ အဆိုပါသဘောတူညီချက်သည်ဤဒေသသို့ QYOU ရဲ့ပထမဦးဆုံး entry ကိုခြေတစ်လှမ်းနှင့်ဥရောပထဲမှာကုမ္ပဏီအတွက်ထပ်မံတိုးချဲ့နေတဲ့အကြောင်းအချက်ပြ။ စားသုံးသူ ...
Ottawa, ON - Emmy®ဆုချီးမြှင့်ခြင်းခံရသည့်Emmy®ဆုချီးမြှင့်သော FileCatalyst ဖိုင်သည်ဖိုင်ကူးပြောင်းမှုဖြေရှင်းနည်းများအားဗားရှင်း ၃.၇ ကိုသူတို့၏ထင်ရှားသောထုတ်ကုန်ဖြစ်သော FileCatalyst Direct သို့ကြေငြာခဲ့သည်။ ၎င်းတို့သည်၎င်းတို့၏ဗဟိုစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးမှုဖြေရှင်းချက်ဖြစ်သော FileCatalyst Central သို့ ၃.၇ update ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ဗားရှင်း ၃.၇ သည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်အရေးကြီးသောဖိုင်များကို၎င်းတို့၏ဖောက်သည်များအားမြန်ဆန်စွာ၊
DPA မိုက်ခရိုဖုန်းအော်စကာဆန်ခါတင်စာရင်းဝင်ခဲ့ပြီးက Short Film သည်အသံ Capture
screet ™ 4061 အသေးစားမိုက်ခရိုဖုန်းကိုသူတဦးတည်းကိုစားစလေိုကွောငျးဤမျှလောက်: ဒိသံကိုဒီဇိုင်နာနှင့်ရုပ်ရှင် recordist Malthe Bjørn Jensen DPA ရဲ့ဃ likes အသံ! ဒါဟာစစ်မှန်တဲ့ရဲ့ - သူကယ့်ကိုသူကဤသေးငယ်သော MICS ၏တဦးတည်းမျိုလျှင်သူကိုဖမ်းယူစေခြင်းငှါ, အဘယျသို့အသံကြည့်ဖို့စပ်စုသည်။ ဒါကြောင့်အမှန်တကယ်အဘို့ဤကြိုးစားကြဖို့မဖြစ်ကောင်းအကောင်းဆုံးရဲ့အသိအမှတ်ပြုနေစဉ်, Jensen says: ...
2 ၏စာမျက်နှာ 87«12345 » 102030...နောက်ဆုံး»